एमालेलाई एकपछि अर्को धक्का, प्रदेश १ र बाग्मती सरकार संकटमा – Satyapati
अस्पताल भर्ना हुनुअघि रुबीले भनिन्, ‘आन्दोलनकारीलाई झुट्टा मुद्दामा नफसाइयोस्’
एमालेलाई एकपछि अर्को धक्का, प्रदेश १ र बाग्मती सरकार संकटमा
दुईवटा प्रदेश सरकार गुमाएको एमालेले अब बाँकी दुई वटा प्रदेश सरकार पनि गुमाउने चिन्ता बढेको छ ।
सत्यपाटी । २९ श्रावण २०७८, शुक्रबार
काठमाडौं । गत संसदीय निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ सत्तारोहण गरेको तत्कालीन नेकपा विभाजित बनेपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले आन्तरिक किचलोका कारण एकपछि अर्को क्षति व्यहोरिरहेको छ । माधव नेपाल समूहको विद्रोहका कारण नेपालले केन्द्र सरकारबाट एमाले बाहिरिनुपरेको छ भने दुई वटा प्रदेश सरकारबाट समेत एमाले बाहिरिएको छ ।
चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार गुमाएको छ । गत चुनावमा केन्द्र र प्रदेशमा सरकारविहीन भएको नेपाली कांग्रेसले केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने गण्डकीमा समेत कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीचको टकरावका कारण संघीय सरकार तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट समेत एमाले बाहिरिएको छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण नै एकल बहुमतबाट सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको सरकार छ भने आफ्नो नेतृत्वका सरकार बनाउन सक्ने कर्णालीमा पनि माओवादीकै सरकार छ । लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले सरकार बनाएसँगै तीन वटा प्रदेश सरकार माओवादी केन्द्रको पोल्टामा पुगेको छ । अहिले संघमा एमाले अध्यक्ष ओली ४१ महिनापछि सरकारबाट बहिर्गमन भएर प्रमुख प्रतिपक्षीमा पुगेका छन् ।
गण्डकीमा ओली सरकार कायमै रहेका बेला मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबनले सरकार गठन गरेको थियो । लुम्बिनीमा पनि विश्वासको मत गुमाएपछि शंकर पोखरेललाई विस्थापन गर्दै गठबन्धनले आफ्नो सरकार बनाएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसक्दा एमालेलाई एकपछि अर्को धक्का लाग्दै गएको छ । दुईवटा प्रदेश सरकार गुमाएको एमालेले अब बाँकी दुई वटा प्रदेश सरकार पनि गुमाउने चिन्ता बढेको छ ।
माधव नेपाल समूहले पार्टी विभाजन गर्यो वा अन्य दलले समर्थन गरेको अवस्थमा बागमती र एक नम्बर प्रदेशबाट पनि एमाले बाहिरिन सक्छ । विवाद बढ्दै गएपछि पार्टी विभाजनको रेखानजिक पुगेको छ । यसअघि तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद बढ्दै जाँदा नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्ष (अहिले माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता बदर गरेपछि ओलीलाई केही राहत पुगेको थियो भने, यी दुवै प्रदेशमा सरकार जोगिएका थिए ।
अन्य संघदेखि प्रदेशहरूसम्म सरकार परिवर्तन भइरहँदा बागमतीमा डोरमणि पौडेल र प्रदेश–१ मा शेरधन राई नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा देखिएको छ । सरकार परिवर्तनका लागि औपचारिक रूपमा पहल सुरु नभए पनि एमाले विभाजनको तहमा पुगेसँगै संकट थप गहिरिएको छ । अहिले एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल सम्मिलित गठबन्धन बलियो भएका कारण नेपाल समूहले चाहेको खण्डमा यी दुवै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुनसक्छ ।
यसअघि गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारबाट एमाले बहिर्गमनमा पर्नु तथा सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा सरकार बनाउने अवसर गुम्नुमा नेपाल पक्ष निर्णायक देखिएको छ । एमाले नेतृत्व तहमा कुरा नमिले बागमती र प्रदेश–१ ले पनि छिट्टै नयाँ सरकार पाउने र अहिलेको सत्तारुढ दल नेकपा एमाले प्रतिपक्षी भएर बस्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।
सन् २०२३ का लागि ‘ईडीभी’ खुला, कसरी भर्ने ?
दुर्घटनाले बंश नै सिध्यायो, पुरै गाउँ शोकमा
प्रहरी भवनमा बाख्रा र कुखुरापालन !
जिल्ला कारागार बझाङमा क्षमता भन्दा तेब्बर कैदीबन्दी
सहुलियतमा चामल लिनेको घुइँचो